YOPE | be different!
A Decade + A spirit = T-Zin
The Origin of Myanmar: PYU
2017 Girl’s Power – အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အား
GYMNASTICS: LIFESYTLE OR FASHION ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Hip Hop ဘယ်လို စခဲ့သလဲ?
YopeFebruary 2, 2018
ဆယ်စုနှစ်+ခံယူချက် = T-Zin Hip Hop ဂီတကိုချစ်လို့ ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလတစ်လျှောက်လုံး Hip Hop သီချင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ T-Zin သူ့ရဲ့ Hip Hop အပေါ်ထားတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ဂီတလောကမှာ ကျင်လည်ရှင်သန်နေတဲ့ True Story က ဘာဖြစ်မလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com www.mizzima.com
မြန်မာအစ တကောင်းက ဆိုတာ မှန်ရဲ့လား။ ဆရာကျော်စိန်ဝင်းရဲ့တွေ့ရှိချက်အရ မြန်မာအစ ဘယ်ကဖြစ်မလဲ
YopeJanuary 5, 2018
2017 မှာ သူတို့ ဘယ်လိုရှင်သန်ခဲ့ကြသလဲ?
YopeDecember 11, 2017
GYM ကစားခြင်းက လူငယ်တွေအတွက် ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံလား ? ဒါမှမဟုတ် အလှသက်သက်လား? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv
YopeDecember 7, 2017
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Hip Hop ဘယ်လို စခဲ့သလဲ? ………………………………………………. Hip Hop ဂီတကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူငယ်အများစု ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Hip Hop ဘယ်လိုစခဲ့သလဲလို့ မေးလာခဲ့ရင်……………… www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
YopeNovember 17, 2017
BOXING GIRL မိန်းကလေးတစ်ယောက် လက်ဝှေ့ထိုးတာ မြင်ဖူးလား?
YopeNovember 14, 2017
BOXING GIRL မိန်းကလေးတစ်ယောက် လက်ဝှေ့ထိုးတာ မြင်ဖူးလား? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
Is it EASY to beaPHOTOGRAPHER? Presented by YOPE
YopeOctober 27, 2017
ပုံရိပ်တွေနောက်ကလူ ………………………. လူတွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ အမှတ်တရတွေကို ဘဝမှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့နိုင်ဖို့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အမှတ်တရပုံရိပ်တွေတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ လူတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။ သူကတော့…………………..။ www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
YopeMay 24, 2017
YopeApril 27, 2017
YopeApril 6, 2017
YopeMarch 16, 2017
LOUDLY SOUNDS ON OCTOBER IN MYANMAR
မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်း မှန်အောင် ရေးနိုင်ရဲ့လား?
Which kind of person that you don’t want to go onaTrip?
ီDo the Boys like to have cosmetic on their face ?
How do Youth of Myanmar comment on Rakhaine Crisis?
YOPE – Success In Your Job
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်အရာတွေက အရေးကြီးလဲ သင့်အမြင်ကရော ဘယ်လိုလဲ ?
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးလဲ
Do you notice the Poison Foods around you?
HOW DO YOU SEE UPON THE FAKE MONK?
H1N1 controlled by Government is ENOUGH?
IS IT TIME TO TEACH SEX EDUCATION AT SCHOOLS OF MYANMAR?
IS BEAUTY NECESSARY FOR WORKPLACE?
5 ways to wear Myanmar Thanaka
5 types of Hair Styles